त्यसपछि उनले फालिदिए आफ्नै …. – blogrecipes.us
त्यसपछि उनले फालिदिए आफ्नै ….
काठमाडौं । जर्मनीको बर्लिनमा एकजना युवकले आफ्नै यौ ‘नां’ग का’टे’र फ्याँ’केका छन् । बर्लिनस्थित एक पार्कमा बुधबार मध्यरातमा प्रहरीले र’ग’ता’म्मे अवस्थामा ल’डेका ती युवकलाई उद्दार गरेको छ ।
इमर्जेन्सी नम्बरमा फोन गरेर गु’हार मागेसँगै पुगेको पुलिसलेति युवकलाई तत्कालै अस्पताल पुर्याएको थियो । तर दुःखको कुरा उनले फ्याँ’केको लिं’ ‘गको टु’क्रा’ फेला नपरेका कारण डाक्टरहरुले उनको गो’ ‘प्य अं’ग’लाई जोड्न पाएनन् ।
ती युवकले निकै नै धेरै म ‘दि’रा से’व’न ग’रे’को र तीन पटकको प्रयासमा आफ्नो लिं’ ‘ग छिनालेको समेत प्रहरीले पत्ता लगाएको छ । प्रहरीले ती’व्र खोजतलासका बाबजुत ती युवकले फ्याँ’कि’ए’को यौ’ ‘नां’ग’को टु’ ‘क्रा फे’ ‘ला पार्न सकेको छैन ।
युवकले के कारणले आफ्नो यौ’ ‘नांग छि’ ‘नाले भन्नेचाहिँ खुलेको छैन । उनको अवस्था ग’म्भीर रहेको कारण सोधपुछ गर्न नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यो पनि : फोनमा हेल्लो भन्ने शब्दको सुरुवात कसरी भयो ?
हामीले सानैबाट फिल्म, टेलिभिजन सुन्दै वा पछिल्ला केही दशकयता आफैले टेलिफोन उठाउने बित्तिकै प्रयोग गर्दै आएको शब्द हो, ‘हेल्लो’ । तर तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ, फोनमा सबैभन्दा पहिले किन ‘हेल्लो’ भनिन्छ ।
यस अलावा हेल्लो भनेर टेलिफोनमा बोल्न शुरूवात गर्नुमा अर्काे कथन पनि चर्चामा छ । खासमा ग्राहम बेलकी प्रेमिकाको नाम समेत हेलो थियो त्यसक्रममा उनी प्रेमिकालाई फोन गर्दा हेल्लो भन्ने गर्दथे । यसरी पूरै विश्वभर फोनको शुरूवातमा हेल्लो शब्द प्रचलनमा आयो । यसमा थोमस एडिसनको देन छ । हेल्लो पुरानो जर्मन शब्द हालाबाट बनेको थियो ।